Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters 1.7.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အမွှေးကင်မရာ: Selfie စိစစ်မှုများ, အလှအပကင်မရာ (ColorCam) 2019 , မိတ်ကပ်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့် selfie အလှတရားကင်မရာကိုများအတွက်အခမဲ့ selfie ကင်မရာက app ကို 2019 ခုနှစ်, ကွဲပြားခြားနား selfie photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါရှိသည်, အလှအပဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, မိတ်ကပ်ကင်မရာ, အနုပညာဒင်္ filter များ, မကျြနှာကို filter များ, မိတ်ကပ်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, selfie ကင်မရာအယ်ဒီတာနှင့်မျက်နှာ camara app ကို။
ချိုမြိန်ကင်မရာနှင့်အတူ✨Letရဲ့ယူ selfies: Selfie စိစစ်မှုများ, အလှအပကင်မရာ (ColorCam) 2019 - နာမည်ကျော် selfie ကင်မရာက app ကို 2019 ခုနှစ်, ဖမ်းယူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖမ်းယူ, ကင်မရာသက်ရောက်မှု & selfie အလှတရားကင်မရာ, photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ထုတ်ပေး, filter များဖမ်းယူ, အလှအပ selfie camara, ဓာတ်ပုံကိုမိတ်ကပ်ကင်မရာနှင့် selfie ကျွမ်းကျင်သူ။
✨ အမွှေးကင်မရာ: Selfie စိစစ်မှုများ, အလှအပကင်မရာ (ColorCam) 2019 ခုနှစ်, အ selfie ကင်မရာ selfie ကျွမ်းကျင်သူ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
- ရီးရဲလ်အချိန် selfie အလှတရားကင်မရာ selfie ကင်မရာသက်ရောက်မှု & အစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ကပ်ကင်မရာ
- အစွမ်းထက် selfie ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့် selfie ကင်မရာ
- ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာ & ဖမ်းယူကင်မရာ & selfie camara 2019 စစ်ထုတ်ပေး
- Funny မျက်နှာ filter များ & မိတ်ကပ် filter ကိုကင်မရာ & အလှတရား camara & ဖမ်းယူ filter များ & မိတ်ကပ်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ
- ဓာတ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်သူ & ဓာတ်ပုံကိုမိတ်ကပ်ကင်မရာ & မိတ်ကပ်ကင်မရာအယ်ဒီတာ & ဖမ်းယူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ
- ပို personalization settings ကို
မကျြနှာကိုကင်မရာ, မိတ်ကပ် camara, မိတ်ကပ် filter ကိုကင်မရာကိုစစ်ထုတ်ပေး, selfie အလှတရား camara, မျက်နှာမိတ်ကပ်ကင်မရာ, selfie ကင်မရာကိုတိုက်ရိုက်စတစ်ကာများ, ကင်မရာစတစ်ကာများ, selfie အယ်ဒီတာနှင့်အတူအလှတရား selfies ခံစား selfie ကင်မရာ filter များဖမ်းယူ, မကျြနှာကိုကင်မရာကိုစစ်ထုတ်ပေး!
======== အမွှေးကင်မရာ: Selfie စိစစ်မှုများ, အလှအပကင်မရာ (ColorCam) 2019 မီးမောင်းထိုးပြထားသည် ========
💕 အချိန်နှင့်တပြေးညီအလှတရားဆိုးကျိုးများ - နာမည်ကျော်ကင်မရာ app ကို 2019
◇ချိုမြိန်ကင်မရာဂုဏ်အသရေကင်မရာနှင့် selfie ကင်မရာကို App ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက် filter များ, အလှအပမိတ်ကပ် photo filters, selfie camara မကျြနှာကို filter များအလှအပကင်မရာ၌ရှိကြ၏။
◇ Selfie အလှတရားကင်မရာ selfie ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကို, မကျြနှာကို filter များ, ကင်မရာစတစ်ကာများဖမ်းယူ။ အလှအပကင်မရာသည်သင်၏ဂုဏ်အသရေဖော်ပြသည်။
◇အလှအပကင်မရာ: မိတ်ကပ်အလှအပအယ်ဒီတာ + selfie photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ + selfie သက်ရောက်မှု + selfie ကင်မရာ 2019 + ဓာတ်ပုံကိုမိတ်ကပ်ကင်မရာ + မကျြနှာကို filter များ + အလှတရား selfies + အလှတရားကင်မရာသက်ရောက်မှု + ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖမ်းယူ
💕 အလှအပကင်မရာ Editor ကို - သင့်အရေပြားကိုတင့်တယ်
ချိုမြိန်ကင်မရာတိုင်း selfie ဓာတ်ပုံကိုအံ့သြဖွယ်စေသည်!
◇ချောမွေ့ & Whiten သင်၏မျက်နှာကို
◇သေးနဲ့ V-shaped မျက်နှာအယ်ဒီတာ
◇ဝက်ခြံ, ဝက်ခြံများနှင့်အညစ်အကြေးများကဲ့သို့ယာယီမစုံလင် Remove
◇သင့်ရဲ့ခါးချုံ့ & တစ်ဦးက Selfie အလှတရားကင်မရာ app ကိုအဖြစ် selfie ဓာတ်ပုံကိုကင်မရာအယ်ဒီတာ app ကိုအတူပါးလွှာခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့ရင်သားတိုးပွား။
◇ချိုမြိန်ကင်မရာအလှတရားကင်မရာအယ်ဒီတာနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆိုးကျိုးများနှင့် selfie photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူသင့်ရဲ့လှပမှုကိုပြပါ။
◇သင်၏မျက်စိအရောင်ထွန်းလင်းနှင့်ဖက်ရှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် selfie ကင်မရာ tools များနှင့်အတူ Make
◇သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆံပင်ဆိုးဆေး - သင်အလှတရား selfies ယူချင်မဆိုလမ်းမိတ်ကပ်ကင်မရာအရောင်ဆံပင်!
◇ချိုမြိန်ကင်မရာမျက်နှာအလှအပ camara အတွက်ကင်မရာကင်မရာ, မိတ်ကပ်ကင်မရာ, မိတ်ကပ် photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ထုတ်ပေး, သင်က selfie အလှတရားကိုကင်မရာအယ်ဒီတာပေးသည်!
◇မိတ်ကပ်ကင်မရာ: မိတ်ကပ် camara အယ်ဒီတာ & selfie ကင်မရာ & selfie ကင်မရာ & photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ထုတ်ပေး ...
💕 မျက်နှာစိစစ်မှုများ - Animated မျက်နှာကင်မရာအယ်ဒီတာ
◇သင့်ရဲ့ pics ဖို့ရယ်စရာစတစ်ကာများ Add! photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထိုကဲ့သို့သော doggie မျက်နှာ, သငျသညျကွညျ့ရှုချင်နှုတ်ခမ်းမွေးတည်ဆောက်အဖြစ်တိုက်ရိုက်စတစ်ကာများ, တန်ချိန်ထောက်ခံပါတယ်။
◇စတစ်ကာများဆံ့: မျက်နှာ filter များ, မိတ်ကပ် selfie filter များ, ရွေ့လျားမှုစတစ်ကာများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ filter များ, မိတ်ကပ် filter ကို, selfie filter များ, filter များဖမ်းယူ ...
💕 Photo Filter များကိုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
◇ photo filters (အလှအပ, LOMO, Vibe, အနုပညာနှင့်အခြားသူများ) အမျိုးမျိုးအခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ! photo filters များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရုပ်ပုံများကို Enhance ။
💕 ဓာတ်ပုံမှ Collage သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
◇ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ App ကို: မိတ်ကပ်ကင်မရာ, selfie ကင်မရာနှင့် selfie ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, မိတ်ကပ်ကင်မရာ, မိတ်ကပ် filter ကို, အလှအပကင်မရာ, selfie အယ်ဒီတာ app ကို, မကျြနှာကို filter များ ...
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 46.66k 28.1M
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Glow Design
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://oneappteamcamera.weebly.com/
App Name: Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters
လက်မှတ် SHA1: 86:A0:CB:C7:56:DB:14:E8:C1:69:24:83:A2:63:8A:AC:D8:83:BF:D4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Glow Design
အဖွဲ့အစည်း (O): Glow Design
Sweet Camera - Selfie Beauty Camera, Filters APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ